करिब दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाले उत्साहजनक रूपमा भाग लिए । मतदान प्रक्रियादेखि उम्मेदवारीसम्म महिलाको सहभागिता बढेको पाइए पनि प्रमुख पदमा निर्वाचित हुने महिलाको सङ्ख्या भने न्यून देखियो । त्यसो त दलहरूले महिलालाई प्रमुख पदमा टिकट दिने कुरामै कञ्ज्युस्याइँ गरे । पहिलो चरणमा ४३ जिल्लामा भएको २८३ स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नुभन्दा गाह्रो महिलाका लागि टिकट पाउनु नै थियो । किनकि टिकट पाएका ठाउँमा महिलाले निर्वाचन सजिलै जितेको देखियो । उदाहरणका लागि नेकपा (एमाले) ले चार नगरप्रमुखमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो, तीमध्ये तीन नगर प्रमुखमा सजिलै विजय हासिल गरे ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कस्तो रहन्छ भन्ने चित्र पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणामले देखाइसकेको छ । मत परिणाम आउन बाँकी ठाउँमा पनि महिला नेतृत्व आउने सम्भावना टरेको छ । अहिलेसम्म हेर्दा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा १२ जना महिला प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ४३ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा भएका निर्वाचनबाट जम्मा १२ जना मात्र प्रमुख पदमा आउन सके । सङ्ख्यात्मक रूपमा यो अत्यत्नै न्यून हो तर उपप्रमुखमा भने अधिकांश स्थानमा महिला नै निर्वाचित भएका छन् । अनिवार्य गरिएको महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य गरी धेरै महिला स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन् तर प्रमुख पदमा भने महिलालाई दलहरूले नै पत्याएनन् । दलहरूले पत्याएका ठाउँमा मतदाताले पत्याएनन् । निर्वाचित भएका १२ स्थानीय तहका प्रमुख महिलामध्ये चार जना नगरपालिकाका प्रमुख छन् । नगरपालिकाको नेतृत्व गर्नेमा काँग्रेसबाट एक जना र एमालेबाट तीन जना महिला नगर प्रमुख बनेका छन् । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका ९२ नगरपालिकामध्ये काँग्रेसबाट जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुखमा कान्तिका सेजुवाल, एमालेबाट नवलपरासीको कावासोतीमा चन्द्रा पुन, चितवनको राप्ती नगरपालिकामा प्रभा बराल र स्याङ्जाको पुतलीबाजरमा सीमा क्षेत्री नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा भने नेपाली काँग्रेसबाट सबैभन्दा धेरै (चार) महिला निर्वाचित भएका छन् । काँग्रेसबाट तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्षमा माया राना, नवलरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा लक्ष्मी पाण्डे, लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिका अध्यक्षमा छुपीमाया गुरुङ र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा गीता गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यस्तै एमालेबाट रसुवाको कालिकास्थान गाउँपालिका अध्यक्षमा सीता अधिकारी पौडेल र म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका अध्यक्षमा थमसरा पुन निर्वाचित हुनुभएको छ । माओवादी केन्द्रबाट पनि दुई गाउँपालिका– सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा दिपा बोहोरा र सल्यानको कुमाखमालिका गाउँपालिकामा दिलमाया बुढामगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
स्थानीय तहमा छ हजार ६८० वटा वडा रहेका छन् । चार महानगरपालिकाका १२३, १३ वटा उपमहानगरपालिकामा २७८, नगरपालिकाकामा दुई हजार ८४९ र ४६६ गाउँपालिकाका तीन हजार ४३० वटा वडा छन् । त्यसमध्येमा सरकारले भर्खरै दुई महानगरपालिका र २२ गाउँपालिका थप्ने निर्र्णय गरको छ । यी स्थानीय तहको गाउँसभा, जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिमा महिला सहभागिताको व्यवस्था छ । ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यहाँ दलहरूले टिकट दिएकालाई आधार मान्दा उपप्रमुख भन्ने पद महिलाकै लागि सिर्जना गरिएको हो कि ? जस्तो देखिएको छ । हुन त महानगरपालिका, नरपालिका वा गाउँ उपप्रमुख न्यायिक एकाईको संयोजक हुने प्रावधान छ ।